Bangladesh: Aorian’ny Fifidianana, Tsy Maintsy Tanterahana Ireo Fampanantenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2018 8:24 GMT
Ny 29 deambra 2008, tamim-pahombiazana no nikarakaran'i Bangladesh ireo fifidianana solombavambahoaka andiany faha-sivy. Mikasika izany, manoratra i Samaresh Vaidya [teny bengali] manao hoe:
Taorian'ireo sorona sy ady marobe, ny 29 desambra 2008, nanana fotoana naha-mety azy ireo olom-pirenena tao Bangladesh, tsy nisy tahotra na olana, nampihatra ny zony handatsa-bato sy hifidy an'ireo kandidà araka ny safidiny… Araka ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena marobe, sahala amin'ireo olom-pirenena amin'ny ankapobeny, heverina ho nalalaka sy tsy nitanila ireo fifidianana ireo.
Neken'ny maro ho malalaka sy marina, nahazo ny fandraisana anjara ambony indrindra 87% ireo fifidianana ireo. Maro ny hafanampo sy faharisihana teny amin'ireo olom-pirenena mba handray anjara amin'io fifidianana io ka hamerina ny demokrasia ao Bangladesh (ireo miaramila no nifehy ny goverenemanta mpisolo toerana napetraka tamin'ny 11 janoary 2007), izay hita aseho amin'ny fomba mazava anatin’ireo antontan'isam-pifidianana [teny anglisy]: amin'ireo 81 tapitrisa mpifidy voarakitra anarana, 31% no sambany mba nifidy (teo anelanelan'ny 18 hatramin'ny 25 taona) ary ny 51% tamin'ireo dia vehivavy.
Fandresena mavesatra azon'ny Grande Alliance no hita tamin'ireo vokatra (toerana 263 tamin'ireo 300), manodidina ny Ligue Awami, tarihin'i Sheikh Hasina. Ho azy irery, nitàna toerana 230 ny Ligue Awami, izay nanome azy ny maro an'isa madiodio. Misahana ny asan'ny Praiminisitra ao Bangladesh manomboka ny 6 janoary 2009 i Sheikh Hasina.
Nilaza mazava tsara ireo olom-pirenena fa mila fanovàna. Nofintinina tanaty taratasy iray misokatra ny fihetsehampo lehibe, taratasy nalefa ho an'i Hasina, nataon'ny blaogera Sherif Al Sayar [teny bengali]:
Ry Mpitondra hajaina,
Ho fanombohana, mamela ahy ianareo hiarahaba anareo noho ny fandresena mavesatra azonareo ary mirary Taombaovao Sambatra ho anareo. Nadikan'ireo olom-pirenena ao Bangladesh ho fandavan'izy ireo ny kolikoly, ny fitantanana ratsy, ny fireharehana ary ireo fanararaotana tafahoatra tsy demokratika nataon'ny governemanta farany teo ny revolisionan'ireo fandatsaham-bato. Ary miaraka amin'izay, ireo olom-pirenena ireo ihany koa no mbola nametraka ny fitokisan'izy ireo taminareo sy ny antokonareo. Manantena aho fa ao anatin'ny fandresenareo, tsy ho adinonareo ireo olom-pirenena. Fa ianareo, miaraka amin'ny governemanta anareo, dia ho, amin'ny fomba tsy mitanila, eo ankilan'izy ireo… izay no fanirianay… Tanora mpifidy aho. Io no fotoana voalohany izay nananako fahafahana nanatontosa ny adidiko sy ny zo maha-olom-pirenena ahy. Nampiasaiko io zo io….Ary amin'ny alalan'ny fampiharana io zo io, izaho, toa ireo mpifidy vaovao hafa an-tapitrisany, dia nametraka eo an-tsorokareo ny andraikitra hitantana ity firenena ity. Izay tiako lazaina dia, mba tsy hijerena an'io fandresena io ho fiverenana amin'ny fahefana, azafady indrindra aleo heverina ny hoe mibaby andraikitra ianareo. Miandry fatratra an'io governemantanareo io fatratra ireo tanora mpifidy toa ahy. Miandry izahay hoe ny fiovàna izay nampanantenainareo (tao anaty fandaharam-potoananareo mikasika ny fifidianana) dia tena ho tontosainareo tokoa. Maniry firenena milamina izahay, tsy isian'ireo herisetra politika, ny kolikoly, ny tsy rariny.
Mahaliana fa, ireo fampanantenana tamin'ny fifidianana izay iadian'ireo olona maro hevitra ao anaty tontolombolongana dia ny fahaiza-mitantana, ary tena manokana amin'izany ny teboka 5.1 mikasika ny programam-pifidianana, izay manao hoe: “Tanana mahery no hifehy ny fampihorohoroana sy ny politikan'ny herisetra ara-pivavahana. Ho karakaraina ny fitsaràna an'ireo mpanao heloka bevava an'ady.”
“Irianay ny fitsaràna sy ny fanamelohana an’ireo mpanao heloka bevava an'ady tamin'ny taona 1971 izahay [teny anglisy]”, no miha-re mafy dia mafy. Manoratra mikasika an'io [teny bengali] i Sadik:
Ny fitsaràna an'ireo mpanao heloka bevava an'ady no tokony ho fangatahantsika voalohany amin'ny governemanta vaovao. Azafady indrindra, mba hanohana an'io fangatahana io anie ny rehetra miaraka amin'ireo namany, ny fianakaviany, ireo mpiara-miasa aminy, sy ny sisa. Raha toa ny olom-pirenena tsirairay, na lehilahy na vehivavy, manandra-peo sy mangataka hoe “Maniry izahay mba ho tsaraina eo anoloan'ny fitsaràna ireo mpanao heloka bevava an'ady”, dia mety hihevitra an'io fangatahana io ihany ny governemanta.
Irasan'ireo blaogera marobe hafa io fijery io, izay nandraman'ireo sasantsasany nanentanana tamim-pahavitrihana ny fanohanan'ny mponina [teny bengali] mba hanome lanja bebe kokoa an'io fitakiana io. Fanentanana fanangonan-tsonia iray no nalefa mba hanavaozana sy hanomezana lanja bebe kokoa ilay fanangonan-tsonia amin'ny tambajotra [teny anglisy] natomboka efa ho fotoana vitsivitsy.
Mihevitra i Sohail Motahir Chowdhury [teny bengali] fa fotoana izao tsy hoe hitsarana fotsiny an'ireo mpanao heloka bevava an'ady, fa koa hanadiovana sy hitsaboana ireo hadisoana tamin'ny lasa. Ity manaraka ity ny sosokeviny:
Taorian'ny fahaleovantena, maro ireo governemanta tsy demokratika akory no nanana fahafahana nanome valisoa ofisialy sy medaly ho an'ireo mpiray tsikombakomba marobe sy ireo mpanao heloka bevava an'ady. Aoka hofoanana ireny fanomezam-boninahitra ireny.
Ho famaranana, mihevitra i Hasan Morshed [teny bengali] fa ny andraikitra fahaiza-mitantana ho an'ny governemanta vaovao dia tsy hifarana fotsiny amin'ny fitondrana an'ireo mpanao heloka bevava an'ady hiatrika ny fitsaràna:
Tsy mety ny hianona fotsiny amin'ny fitsaràna an'ireo mpanao heloka bevava an'ady. Tsy maintsy ajanona koa ireo politika mifototra amin'ny fivavahana… Io karazana politika io dia mifanohitra amin'ny fahaterahan'i Bangladesh, tokony hivoahantsika ny nofinofin-tsaina miraikitra amin'ny finoana hoe ny karazana politika tahaka izany dia mety ho tsara ho an'ny firenena.